कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल मार्केटि Of को क्रान्ति | Martech Zone
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल मार्केटि Of को क्रान्ति
मंगलवार, सेप्टेम्बर 28, 2021 मंगलवार, सेप्टेम्बर 28, 2021 Isaja Karadovska
डिजिटल मार्केटि every हरेक को मूल हो ecommerce व्यवसाय। यो बिक्री मा ल्याउन, ब्रान्ड जागरूकता बढाउन, र नयाँ ग्राहकहरु सम्म पुग्न को लागी प्रयोग गरीन्छ।
जे होस्, आजको बजार संतृप्त छ, र ईकॉमर्स व्यवसायहरु कडा मेहनत गर्न को लागी प्रतियोगिता हराउन पर्छ। यति मात्र हैन — उनीहरुले नवीनतम टेक्नोलोजी प्रवृत्तिहरुको ट्र्याक राख्नु पर्छ र तदनुसार मार्केटि techniques प्रविधिहरु लाई लागू गर्नु पर्छ।
नवीनतम टेक्नोलोजिकल आविष्कारहरु मध्ये एक जुन डिजिटल मार्केटि revolution मा क्रान्ति ल्याउन सक्छ कृत्रिम बुद्धि (AI)। हेरौं कसरी।
आजको मार्केटि। च्यानलहरु संग महत्वपूर्ण मुद्दाहरु
यस समय, डिजिटल मार्केटि somewhat केहि सीधा सीधा देखिन्छ। ईकॉमर्स व्यवसायहरु एक मार्केटर भाडामा लिन वा एक टीम बनाउन सक्छ कि सामाजिक नेटवर्कहरु को प्रबंधन, सशुल्क विज्ञापनहरु लाई संभाल्ने, प्रभावितहरुलाई भाडामा लिनुहोस्, र अन्य पदोन्नतिहरु संग सम्झौता गर्दछ। अझै पनी, धेरै महत्वपूर्ण मुद्दाहरु उठ्छन् कि ईकमर्स स्टोरहरु संग समस्या छ।
व्यापार मिस ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण -ग्राहक उन्मुख हुनु प्रत्येक व्यवसाय को लक्ष्य हुनु पर्छ। अझै पनी, धेरै व्यापार मालिकहरु यो विचार मा पास र आफैं मा ध्यान केन्द्रित रहन्छन्, आफ्नो ROI, र उनीहरुको उत्पादनहरु। नतिजाको रूपमा, ग्राहक निजीकरण अस्पष्ट रहन्छ, र कम्पनीहरु प्राय: पछि यो संग सम्झौता गर्ने निर्णय। दुर्भाग्यवश, यो एक ठूलो गल्ती हो। आजको संसारमा, ग्राहकहरु लाई थाहा छ कि उनीहरु कती लायक छन् र सुँगुर बैंक को रूप मा व्यवहार गरीरहेको मन पर्दैन। एक ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण बिना, व्यवसायहरु एक वफादार ग्राहक आधार बनाउन र प्रतिद्वंद्वीहरु मा एक प्रतिस्पर्धी किनारा हासिल गर्न मा छुट्छन्।
त्यहाँ ठूलो डाटा संग समस्याहरु छन् - ईकमर्स स्टोर मालिकहरु लाई थाहा छ कसरी ग्राहकहरु को बारे मा आवश्यक डाटा स collecting्कलन सफल मार्केटि campaigns अभियानहरु को सम्बन्ध मा छ। ग्राहक डाटा सing्कलन पनि ग्राहक अनुभव मा सुधार र, यस प्रकार, राजस्व वृद्धि गर्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश, ब्यापारहरु प्राय ठूलो डाटा एनालिटिक्स चुनौतिहरु संग सामना गरीरहेका छन्। यसले उनीहरुलाई महत्वपूर्ण जानकारी मा छुट्याउँछ कि उनीहरुलाई अझ धेरै मद्दत गर्न सक्छ व्यवहारिक मार्केटि.
अमेरिकी सल्लाहकार र लेखक जेफ्री मूर को शब्दहरुमा:
ठूलो डाटा बिना, कम्पनीहरु अन्धा र बहिरा छन्, एक फ्रीवे मा हिरण जस्तै वेब मा भटक।
जेफ्री मूर, मार्केटि and र मुख्यधारा ग्राहकहरु को लागी विघटनकारी उत्पादनहरु बेच्दै
सामग्री निर्माण मुद्दाहरु वास्तविक छन् - तथ्य यो छ कि सामग्री बिना कुनै डिजिटल मार्केटि छ। सामग्री ब्रान्ड जागरूकता सुधार गर्न, रैंकिंग बढाउन, र ब्याज उत्पन्न गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। सामग्री जुन सबैभन्दा धेरै डिजिटल मार्केटि in मा प्रयोग गरीन्छ ब्लग पोस्ट, लेख, सामाजिक अपडेट, ट्वीट, भिडियो, प्रस्तुतीकरण, र ebooks। अझै पनी, कहिले काहिँ ब्यापारहरु लाई थाहा छैन कि कुन सामग्री ले धेरै फाईदा ल्याउन सक्छ। उनीहरु लक्षित दर्शकहरु को प्रतिक्रियाहरु लाई उनीहरु के साझा गर्न को लागी संघर्ष गरीरहेछन् र यो सबै एकै ठाउँमा कभर गर्न को लागी सट्टा के राम्रो काम गर्दछ ध्यान केन्द्रित रहन को लागी प्रयास गर्न सक्छन्।
सशुल्क विज्ञापन सधैं सीधा छैनन् - केहि ईकॉमर्स स्टोर मालिकहरु प्राय विश्वास गर्छन् कि जब देखि उनीहरु पहिले नै एक स्टोर छ, मानिसहरु आउनेछन्, तर सामान्यतया सशुल्क विज्ञापन को माध्यम बाट। तेसैले, उनीहरु लाई लाग्छ कि सशुल्क विज्ञापनहरु लाई छिटो ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी एक सुरक्षित तरीका हो। जे होस्, मार्केटरहरु लाई सधैं विज्ञापनहरु लाई अनुकूलन को लागी नयाँ तरीकाहरु को बारे मा सोच्नु पर्छ यदि उनीहरु यो सफलतापूर्वक गर्न चाहन्छन्। अर्को पक्ष विचार गर्न को लागी एक अवतरण पृष्ठ हो। सबै भन्दा राम्रो मार्केटि results परिणाम को लागी, ल्यान्डि pages पृष्ठहरु ठीक ढंग बाट ढाँचा र सबै उपकरणहरु मा काम गर्नु पर्छ। अझै, धेरै व्यवसायहरु एक ल्यान्डि page पृष्ठ को रूप मा आफ्नो होमपेज को उपयोग गर्ने निर्णय, तर त्यो सधैं सबै भन्दा राम्रो समाधान छैन।
गरीब ईमेल अनुकूलन - उत्पादनहरु को प्रचार को सबै भन्दा राम्रो तरीकाहरु मध्ये एक ईमेल मार्केटि includes्ग सामेल छन्। यसको साथ, ईकॉमर्स व्यवसायहरु सीधा एक ग्राहक संग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र उच्च रूपान्तरण दर छ। ईमेलहरु को नेतृत्व संग सम्बन्ध मा सुधार र भविष्य, वर्तमान, र विगतका ग्राहकहरु को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
दुर्भाग्यवश, ईमेल को औसत खोल्ने दर कहिले काहिँ धेरै कम छ। यति धेरै कि औसत खुद्रा खुल्ला दर मात्र 13%को बारे मा छ। एउटै क्लिक को माध्यम बाट दरहरु को लागी जान्छ। सबै उद्योगहरु मा औसत ईमेल CTR २.2.65५%हो, जसले भारी बिक्री लाई प्रभावित गर्दछ।
StartupBonsai, ईमेल मार्केटि Stat सांख्यिकी
एआई समाधान संग सर्वश्रेष्ठ अभ्यास - सौभाग्य देखि, आजको टेक्नोलोजी डिजिटल मार्केटि in मा प्रयोग गर्न सकिन्छ लगभग सबै मुद्दाहरु माथि भनिएको छ। एआई र मेशिन शिक्षा निजीकरण, अनुकूलन, र सामग्री निर्माण मा सुधार गर्न धेरै तरिका मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ छ कसरी।
राम्रो निजीकरण को लागी एआई - ती ईकमर्स ब्यापारहरु जो पछिल्लो प्रवृत्तिहरु को ट्रयाक राख्छन् एआई को रूप मा चाँडै ग्राहक पृष्ठ मा ल्याण्ड को रूप मा निजीकरण सुधार गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै प्रयोगकर्ताहरु उस्तै छैनन्, र एआई संग, ब्रान्डहरु निम्न गर्न सक्छन्:
उपकरणहरु भर व्यक्तिगत सामग्री प्रदर्शन गर्नुहोस्
एक उत्पादन वा स्थान मा आधारित सेवा प्रदान गर्नुहोस्
अघिल्लो खोज र कीवर्ड मा आधारित सिफारिशहरु प्रदान गर्नुहोस्
आगन्तुक को आधार मा वेबसाइट सामग्री परिवर्तन गर्नुहोस्
भावना विश्लेषण को लागी एआई को उपयोग गर्नुहोस्
ईकमर्स निजीकरण को सबै भन्दा राम्रो उदाहरण हो अमेजन निजीकृत, जसले विकासकर्ताहरुलाई अमेजन जस्तै मेशिन शिक्षा प्रविधिको प्रयोग गरी एप्स बनाउन को लागी अनुमति दिन्छ।
ठूलो डाटा विश्लेषण को लागी शक्तिशाली उपकरण -एक ग्राहक केन्द्रित रणनीति बनाउन को लागी, व्यवसायहरु लाई स collecting्कलन, विश्लेषण, र वैध ग्राहक जानकारी को फिल्टर मा काम गर्नु पर्छ। एआई संग, डाटा संग्रह र विश्लेषण अधिक सीधा हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, सही एआई उपकरणले निर्धारण गर्न सक्छ कि कुन प्रकार को उत्पादनहरु लाई सबैभन्दा धेरै किनेको छ, कुन पानाहरु लाई धेरै देखीन्छ, र उस्तै। एआई सम्पूर्ण ग्राहक यात्रा ट्र्याक र बिक्री मा सुधार गर्न को लागी सही समाधान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, गुगल एनालिटिक्स संग, मार्केटर्स एक वेबसाइट मा ग्राहक व्यवहार हेर्न सक्नुहुन्छ।
सामग्री निर्माण को लागी अनलाइन एआई प्लेटफार्महरु - एआई सामग्री संग दुई सबैभन्दा सामान्य मुद्दाहरु लाई हल गर्न सक्नुहुन्छ - सामग्री निर्माण को गति र सामग्री को लागी ग्राहक प्रतिक्रिया को विश्लेषण। जब यो सामग्री निर्माण को लागी आउँछ, त्यहाँ धेरै एआई उपकरणहरु उपलब्ध छन् अनलाइन मार्केटर्स लाई सामाजिक पोस्ट, लेख को लागी हेडलाइन्स को लागी ब्रान्डेड छविहरु संग आउन को लागी, वा एक ब्लग पोस्ट लेख्न वा एक प्रचार भिडियो बनाउन को लागी मद्दत गर्न को लागी। अर्कोतर्फ, एआई संचालित सफ्टवेयरले मार्केटर्सलाई मात्र जनसांख्यिकी भन्दा बढी विश्लेषण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यो ग्राहक व्यवहार र सामाजिक मिडिया संलग्नता निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ। केहि उदाहरणहरु अंकुरित सामाजिक समावेश छन्, कोर्टेक्स, Linkfluence Radarly, र यति मा।
एआई अनलाइन पदोन्नति सरल बनाउन सक्नुहुन्छ - यस समय, फेसबुक र अन्य धेरै प्लेटफार्महरु एआई उपकरणहरु लाई मार्केटर्स लाई सजीलै संग आफ्नो विज्ञापनहरु को ब्यवस्थापन गर्न मद्दत को लागी प्रदान गर्दछ। यसको मतलब यो हो कि विज्ञापन बेकार जाने छैन। एक हात मा, मार्केटर्स को जानकारी को सबै प्रकार को पहुँच छ कि विज्ञापन अनुकूलन लाई सजिलो बनाउँछ। अर्कोतर्फ, फेसबुक एआई को उपयोग गर्दछ लक्षित दर्शकहरु लाई सही ती विज्ञापनहरु वितरण गर्न। थप रूपमा, ल्यान्डि page पृष्ठ विज्ञापनहरु को अलावा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ। सबै भन्दा राम्रो सम्भव ल्यान्डि page पृष्ठ डिजाइन एक ठूलो फरक बनाउन सक्छ। एआई एक उल्लेखनीय ल्यान्डि— पृष्ठ को दुई महत्वपूर्ण घटक संग मद्दत गर्न सक्नुहुन्छनिजीकरण र डिजाइन.
ईमेल अनुकूलन को लागी एआई - चूंकि ईमेल मार्केटि online अनलाइन व्यापार को लागी महत्वपूर्ण छ, एआई कसरी ईमेलहरु बनाईन्छ सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। अरु के छ त, AI गुणस्तरीय ईमेल पठाउन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ र लागत प्रभावी हुँदा राजस्व वृद्धि। यस समय, एआई संचालित उपकरणहरु गर्न सक्नुहुन्छ:
ईमेल विषय लाइनहरु लेख्नुहोस्
निजीकृत ईमेल पठाउनुहोस्
ईमेल अभियान सुधार गर्नुहोस्
अनुकूलन ईमेल पठाउने समय
ईमेल सूचीहरु संगठित गर्नुहोस्
यो अनुकूलन खोल्न र क्लिक को माध्यम बाट दरहरु लाई बढाउन सक्छ र अधिक बिक्री को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ। यसबाहेक, एआई च्याटबटहरु मेसेजिंग एप्स मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, ईमेल अभियान को पूरक हो, र परम व्यक्तिगत अनुभव प्रदान गर्न।
डिजिटल मार्केटि every हरेक व्यवसाय को सफलता को एक महत्वपूर्ण भाग हो। अझै पनी, ईकमर्स स्टोरहरु लाई हराउन को लागी अधिक र अधिक प्रतिस्पर्धा छ, र त्यो बाटो मा, मार्केटर्स धेरै चुनौतीहरु लाई सामना गर्न सक्छन्। उदाहरण को लागी, सामग्री बनाउन थकाउने बन्न सक्छ, र ठूलो डाटा संग व्यवहार असंभव लाग्न सक्छ।
सौभाग्य देखि, आज, त्यहाँ धेरै AI- संचालित उपकरणहरु त्यहाँ मार्केटर्स लाई उनीहरुको अभियान लाई अनुकूलन गर्न मद्दत गर्दछ र व्यवसायहरु राजस्व उत्पन्न गर्दछ। सुधारिएको ईमेल बाट साधारण अनलाइन पदोन्नति सम्म, AI लाई डिजिटल मार्केटि is कसरी गरिन्छ परिवर्तन गर्ने शक्ति छ। यसको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा - यो मात्र केहि क्लिक टाढा छ।
प्रकटीकरण: Martech Zone यस लेख मा एक अमेजन सम्बद्ध लिंक छ।
टैग: aiऐ chatbotsऐ उदाहरणहरुऐ प्लेटफार्महरुएआई समाधानऐ उपकरणअमेजन निजीकृतकृत्रिम बुद्धिठुलो डेटाठूलो डाटा विश्लेषणब्रान्ड जागरूकताच्याट बोट्सक्लिक-थोरै दरहरूसामग्री निर्माणग्राहक केन्द्रितडिजिटल मार्केटिङईमेल ctrईमेल मार्केटिंग तथ्या .्कईमेल अनुकूलनफेसबुक ऐजेफ्री मूरनवीनताअनलाइन पदोन्नतीहरूखुला दरहरूसशुल्क विज्ञापननिजीकरणपीपीसीएसईओ रैंकिंगस्टार्टअपबोनसाई
Isaja Karadakovska एक पोल-विज्ञान स्नातक, एक पूर्व कनिष्ठ शोधकर्ता, र वर्तमान मा छ टेक टम्बल सामग्री संयोजक। उनी खोज्न र महान सामग्री बनाउन को लागी संचालित छन्। उनको खाली समय उनको बिरुवा जुनून को लागी समर्पित छ।